नेत्र सहायकको भरमा बुटवलका अधिकांश... :: भगवती पाण्डे :: Setopati
नेत्र सहायकको भरमा बुटवलका अधिकांश आँखा क्लिनिक अनुगमन शून्य
भगवती पाण्डे बुटवल, जेठ २१
बुटवलको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं ६ का कृष्ण बस्नेत आफूले नयाँ बनाएको भन्दा पुरानै चस्माले राम्रोसँग देखिएको भन्दै चस्मा बनाउन दिएको पसलमा विवाद गर्दै थिए।
चस्मा पसलेले ‘तपाईंले दिएको कागजका आधारमा बनाएको हुँ, आँखा जचाउँदा चिकित्सकले दिएको रिपोर्ट नै फरक परेको होला’ भन्दै बचाउ गरे। हुन पनि त्यस्तै रहेछ उनले लगाइरहेको चस्माको पावर र पछिल्लो पटक दिएको पावर अंक फरक थियो।
‘चिनेका आफन्तकोमा आँखा जचाएको यस्तो परेछ, अब पुरानै चस्मा लगाउनुपर्ला,’ भन्दै फर्किए ।
बुटवलको अमरपथमा बग्रेल्ती चस्मा पसल छन्। जहाँ आँखाको समेत जाँच हुन्छ । तर ती जाँच गर्नेहरू आँखा जाँचेर चस्मा दिने वा औषधि दिने अधिकार प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी हुन होइनन् त्यसतर्फ कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन।
पुष्पलाल पार्कदेखि अमरपथको बाटो उत्तर लाग्नासाथ चस्माको व्यापार गर्ने दर्जन बढी पसल छन्। जहाँ आँखा समेत जाँच गरेर पावरवाला चस्मा दिइन्छ।
तर ती जाँच गर्ने को हुन् ? कसरी जाँच हुन्छ ? तिनको विज्ञता के हो कसैसँग तथ्यांक छैन। अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पनि त्यता पुग्न सकेको छैन।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख केहरसिंह गोदार आँखा जाँच गर्ने क्लिनिक र चस्मा पसलहरूको अनुगमन नगरिएको स्वीकार्छन्। उनले पछिल्लो समय आँखा जाँच गर्ने क्लिनिकहरूको समेत अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमै गएकोले सम्बन्धित स्थानीय तहले नै अनुगमन गर्नुपर्ने सेतोपाटीलाई बताए।
त्यसैगरी, पुष्पलाल पार्कबाट पूर्वतर्फको गल्लीमा केही आँखा उपचार केन्द्रहरू छन्। त्यहाँ नेत्र विशेषज्ञहरूले आँखा चेकजाँच गर्ने गरे पनि चस्मा बनाउनेहरू भने अनुभवका आधारमा तय भएका नै भेटिए।
आँखा जाँच गर्ने क्लिनिकहरूमा बिरामीको नाम दर्ता लगायतका कुनै प्रक्रिया हुँदो रहेनछ। जब बिरामी आउँछ तबमात्र खोजिन्छ नेत्र विशेषज्ञ वा नेत्र सहायक, कतिपय आँखा क्लिनिकहरू नेत्र सहायकका भरमा चलेका रहेछन्। तिनै हुन् बिरामीका आँखा जाँच गर्ने भरपर्दा चिकित्सक।
बुटवलमा रहेका आँखा उपचार केन्द्रहरूको कहिल्यै अनुगमन समेत भएको छैन। त्यसैले पनि जसले जाँच गरे पनि चलिरहेको छ।
बिरामी आउँछन् जाँच गरिन्छ, चस्मा दिइन्छ जसलाई बिरामीहरू पावरवाला चस्मा भन्छन्। तिनीहरूलाई पावर दिनेहरूले बिरामीको अभिलेख नै राख्दैनन्। कसको जाँच कसले गर्‍यो बिरामीले नै थाहा पाउँदैनन्। तर जाँच भएकै हुन्छ।
आँखा उपचार गर्ने र आँखाका बिरामीहरूलाई दिने चस्माको काम सामान्य व्यापारिक कारोबार जस्तो बनेको छ।
चस्मा लगाउनु फेसनका रूपमा लिने र व्यापारका रूपमा खुलेका चस्मा पसलबाट चस्मा किनेर लगाउने गरेका कारण आँखाको समस्यालाई सामान्य समस्या बुझ्ने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
रुपन्देहीमा करिब २४ जना नेत्र विशेषज्ञ छन्। तीमध्ये १८ जना नेत्र विशेषज्ञ रणअम्विका आँखा अस्पताल भैरहवामा छन्, उनीहरूले बाहिर क्लिनिकमा हेर्न पाउँदैनन्। यसका साथै ३ जना श्रीकृष्ण नेत्रालय र ३ जना नेत्र विशेषज्ञ बुटवलस्थित लायन्स आँखा अस्पतालमा कार्यरत रहेका छन्, उनीहरू एमबिबिएस एमडी हुन्।
त्यसैगरी आँखा चेकजाँच गर्ने अर्काथरी चिकित्सक दृष्टि विशेषज्ञ हुन्, जसलाई बिएससी अप्टोमेट्री भनिन्छ। उनीहरूले बिएससी पास गरेपछि डाक्टर अफ अप्टोमेट्री अध्ययन गरेका हुन्छन् । त्यस्ता चिकित्सक रुपन्देहीमा एक जना अमित केसी मात्र हुन्।
आँखाको उपचार र चेकजाँच गर्ने टोली जसलाई नेत्र सहायक भनिन्छ। रुपन्देहीमा नेत्र सहायकहरूको संख्या ४५ जना रहेको नेत्र सहायक परिवार नामक संस्थाले जनाएको छ। तीमध्ये ३५ जना जति रणअम्वीका आँखा अस्पतालमै कार्यरत छन्।
एसएलसीपछि अल्फाल्मिक एसिस्टेन्टको ३ वर्षे कोर्ष हुन्छ। उक्त कोर्ष पूरा गरेपछि तयार हुन्छन् नेत्र सहायक । उनीहरु नेत्र विशेषज्ञको सहयोगी भई काम गर्ने हो। तर रुपन्देहीका अधिकांश आँखा क्लिनिक नेत्र सहायककै नेतृत्वमा चलेका छन्।
उनीहरू पनि मोबाइल टिम (अनकल) को रूपमा रहेको देखिन्छन्। बिरामी आएपछि जताबाट फोन आउँछ त्यतै गएर जाँच गरिदिन्छन्। बुटवलमा नेत्र सहायकहरू इन्दिरा जोशी, मनोहर न्यौपाने र हिरालाल धामीले थामिरहेका छन् ।
रुपन्देहीको आँखा क्लिनिकमा अर्को पुरानै रोग छ। एउटा नेत्र सहायक वा नेत्र विशेषज्ञ राखेर क्लिनिक दर्ता गर्ने, तर उनीहरू नबस्ने यो समस्या अन्य फार्मेसीहरूको जस्तै हो।
चस्मा बनाउनेहरूको विज्ञता कसैले जाँचेको छैन। सेवाग्राही आँखा जाँच्नेले दिएको कागज लिएर जान्छन्, व्यापारीले त्यसैका आधारमा शिशा काट्न थाल्छन्। रोजेको फ्रेममा जडान गरिदिन्छन्। त्यसैमा सकिन्छ आँखाको उपचार।
दृष्टि विशेषज्ञ डाक्टर अमित केसी भन्छन्,‘आँखामा लगाइने चस्माको शिशा मात्र होइन फ्रेमले समेत आँखालाई प्रभाव पार्छ, ग्राहकले रोज्यो भन्दैमा पावर चस्मा लगानेलाई सोही फ्रेम दिनु हुँदैन, कतिपय अवस्थामा आँखाको समस्या र लगाउने शिशासँग मेल नखान सक्छ।’
चस्मामा शिशा जडान गर्नेहरूको अन्य अध्ययन खासै केही देखिएन। नेत्र विशेषज्ञले आँखा जाँच गर्छन्, उनीहरूले लेखे अनुसारको चस्मामा पावर मिलाएर ग्लास बनाउनेहरूको योग्यता केहो खोजी भएको छैन।
रुपन्देहीका अधिकांश चस्मा पसलमा पावर ग्लास लगाइदिनेहरू काम गरेको अनुभवका आधारमा योग्य भएका छन्। चस्मा बनाउने तालिम सिटीइभिटीले दिने गर्छ। उक्त तालिमका लागि आठ पास भएपछि ३ महिने कोर्ष हुन्छ। उक्त कोर्ष ३ महिनामा पास गर्न नसके थप ३ महिना गरी ६ महिना गराउने प्रचलन छ। तर पास हुनैपर्छ ।
चिकित्सकले दिएको जाँच गर्ने विज्ञता अप्टिकल सहायकमा हुन्छ। बुटवल र भैरहवाका पावरवाला चस्मा बेच्ने अधिकांश चस्मा पसलमा अप्टिकल सहायक छैनन्।
बुटवलमा पावरवाला चस्मा बेच्दै आएका चस्मा पसलहरूमा अप्टिकल सहायक समेत छैनन्। उनीहरूले अन्य व्यवसाय जस्तै पावरवाला चस्माको व्यापार चलाइरहेका छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २१, २०७६, ११:४६:००